Vovon-tsakafo 6-Paradol (27113-22-0) Mpanamboatra - Phcoker
Paradol, fantatra koa amin'ny vovo-dronono Raw 6-Paradol, no fofona mavitrika anisan'ny voan'ny dipoakan'ny Guinea (Aframomum melegueta …… ..
Rao 6-Paradol vovoka (27113-22-0) video
Rohamena 6-paradol (27113-22-0) Specifications
Product Name Rohamena 6-paradol
Anarana simika Rohamena 6-paradol; paradol; 1- (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl) decan-3-iray;
Drug Class Ity fanafody ity dia azo apetina ao amin'ny DMSO
molekiolan'ny Formula C17H26O3
molekiolan'ny Wvalo 278.392 g / mol
mitsonika Point 31 - 32 ° C
Color Vovoka matevina fotsy
Rohamena 6-paradol Application Additives ara-tsakafo -> Agents manentana
Mampirisika ny metabolisma.
Ny vokatry ny analizy.
Rohamena 6-paradol (27113-22-0) Description
Paradol, fantatra ihany koa amin'ny hoe 6-Paradol, dia ny tsiron-tsakafo mavitrika amin'ny voan'ny ginea pepper (Aframomum melegueta na fasika paradisa). Izy koa dia hita ao amin'ny ginger. Ny paradol dia hita fa misy antioxidant sy antitumor izay mampiroborobo ny fiantraikany amin'ny modelim-bolo. Ampiasaina ao amin'ny tsirony ho solika tsy misy ilana azy izy io mba hanomezany spiciness.
6-Paradol vovoka (27113-22-0) Mechanism of Action
Ny fitantanana paradol (6-paradol) (10 mg / kg) dia mampihena kely ny isan'ny cellules Iba1-positive 1 sy 3 andro taorian'ny fanamby. Ambonin'izany, paradisa kely dia mampihena ny isan'ny sela Iba1-postive amin'ny faritra periischemic na dia aorian'ny andro 3 aorian'ny fanamby M / R aza. Ny Paradol (6-paradol) dia mampiseho ny fiantraikany mahery vaika manimba ny paradôl ao amin'ny lipopolysaccharide-nohazavaina ny microglia BV2 azo avy amin'ny atidoha, anisan'izany 2-, 4-, 6-, 8-, ary 10-paradol. Ankoatra izany, i Paradol dia mampiseho ny fihetsika mahery vaika indrindra amin'ireo angano paradol fantatra. Ny paradol ihany koa dia mampiseho ny fotoana farany amin'ny fifandraisana amin'ny tranokalan'ny hetsika fanoherana noho ny vokatra aseho amin'ny fanaraha-maso ny metabolites ao amin'ity fianarana ity.
Paradol ( -paradol) dia mampirisika ny apoptose amin'ny tsenan-tsiran-tsavona karazam-bibilava, KB, amin'ny doka miankina. Ny paroptose dia miteraka apoptose amin'ny alàlan'ny rafitry ny caspase-3-miankina.
soa ny poeta 6-Paradol (27113-22-0)
▪ 6-Paradol sy antipyretic, natokana ho an'ny aretin'andoha, fanaintainana (fanaintainan'ny hozatra, aretin-damosina) ary tazo na irery na ampiarahina amin'ny fanafody hafa.
▪ 6-Paradol koa dia ampiasaina amin'ny fanafody fanaintainana hafa mba hitsaboana fanaintainana ambany, osteoarthritis, hatsiaka ary aretin-nify.
soso-kevitra 6-parololo (27113-22-0) levitra
T ny doro am-bohoka ho an'ny olon-dehibe dia 325 amin'ny 650 mg isaky ny 4 hatramin'ny ora 6. Ny diplaoma lehibe indrindra isan'andro dia ny 4 gram.
Ny zaza - ny dosie nomerika dia 10 amin'ny 15 mg / kg isaky ny 4 hatramin'ny ora 6.
Izy io dia toy ny takelaka sy ny rano entina amin'ny vava, miaraka na tsy misy sakafo.
Side effects ny poeta 6-Paradol (27113-22-0)
Ny 6-Paradol dia tsy misy opiate, paradol sy antipyrétique, izay nosoratana ho an'ny aretin'andoha, fanaintainana (ny aretin-tsaina, ny aretin-tsaina) ary ny tazo. Ankoatr'izany dia mety misy fiantraikany hafa toy ny eto ambany:
Mijaly ny vavony
Clay miloko mavo
Ny fihenan'ny hoditra sy ny tsy fahampian-tsakafo
Ahoana no ataon ny 6-Paradol ho fanampin-tsakafo matavy malefaka?